Jane Maland Cady waxay ku soo biirtay McKnight sanadkii 2008 isagoo ahaa agaasime aasaasi ah barnaamijkeeda caalamiga ah. Intii ay shaqeyneysay, waxay kormeertay deeq-lacageedka diiradda saarey hab-nololeedyada sinnaanta iyo waara ee in ka badan 15 dal oo ku yaal Afrika, Latin Amerika, iyo Koonfur-bari Aasiya Udub dhexaad u ah shaqadeeda waa cilmi baarista cilmiga beeraha ee beeralayda yar yar iyo xuquuqda ilaha dabiiciga ee bulshada deegaanka.
Ka go'an wada shaqeyn loo dhan yahay iyo isku xirnaan, Maland Cady wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray horumarinta iyo kobcinta ururo badan oo muhiim ah. Kuwaas waxaa ka mid ah dhowr shabakadood oo hoose oo Mekong ah iyo Isbahaysiga Caalamiga ah ee Mustaqbalka Cuntada - isbahaysi istiraatiiji ah oo aasaas u ah samafal oo horumariya caafimaad, sinnaan, adkeysi, iyo nidaamyo kala duwan oo cunto iyo beeraha ah. Waxay u adeegtaa iyada oo wada-guddoomiye ka ah guddiga hagidda Global Alliance.
Maland Cady waxay khibrad ballaadhan u leedahay nidaamyada cuntada ee bey'ada ku saleysan macallin ahaan, cilmi-baare, qiimeeye, iyo fuliyaha dhulka. Kahor intaysan kubiirin McKnight, waxay ahayd lataliye madax banaan oo qiimeyn ah mudo 15 sano ah, kana shaqeysay gudaha iyo caalamkaba dadaallada horumarinta bulshada iyo nidaamyada beeraha. Waayo-aragnimadeeda waxaa ka mid ah la shaqeynta shirkadaha gaarka loo leeyahay silsiladda qiimaha cuntada dabiiciga iyo tan dabiiciga ah laga soo bilaabo shahaadada illaa wax soo saarka iyo tafaariiqda. Intaa waxaa sii dheer, waxay gacan ka geysatay ballaarinta suuqyada USA ee ganacsiga caddaaladda iyo wax soo saarka dabiiciga ah ee Koonfurta Ameerika iyo USA.
Maland Cady wuxuu haystaa shahaadada PHD iyo MA ee cilmiga beeraha ee jaamacada Minnesota iyo BA dhanka cadaalada bulshada ee jaamacada Augsburg. Waxay ku nooleyd oo si weyn uga shaqeysay Brazil iyo qaybo ka mid ah Latin America. Waxaa lagu kiciyey beero ku taal koonfurta gobolka Minnesota, waxaa ka go'an inay la shaqeyso beeraleyda si kor loogu qaado joogtaynta iyo sinnaanta beeraha iyo nidaamyada cuntada adduunka oo dhan. Iyadu waa qof beer jecel oo hooyadeed leh afar carruur ah.
Kusoo dhawow Bogga CCRP.org Cusub!
By Jane Maland Cady Oktoobar 2019